သူမရဲ့ ချွေးနဲစာနဲ့လှူထားတဲ့အလှူငွေတွေကို မတရားလိမ်စားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လိပ်ပြာလုံဖို့ပြောလိုက်တဲ့ “အိန်ဂျယ်လမုန်”….. – Cele Snap
သူမရဲ့ ချွေးနဲစာနဲ့လှူထားတဲ့အလှူငွေတွေကို မတရားလိမ်စားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လိပ်ပြာလုံဖို့ပြောလိုက်တဲ့ “အိန်ဂျယ်လမုန်”…..
March 18, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ.. မော်လ်ဒယ်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော အိန်ဂျယ်လမုန်ကတော့ အနုပညာ လောကမှာ ယောက်ျားလေး ပရိသတ်တွေ အပြင် မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေကပါ ချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါပဲ..။ အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့သူမကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေ မှာလည်း သူမအနေနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ တတ်နိုင် သလောက်ပြုလုပ်ကာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ကိုယ်တိုင်လမ်းပေါ်ထွက်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အင်တိုက် အားတိုက်ပါဝင်နေတဲ့အပြင် လှူဒါန်းမှုတွေ မှာလည်း လက်မနှေးဘဲ အလှူလေးတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ အိန်ဂျယ်လမုန် ကတော့ အလှူငွေတွေကို လိမ်စားနေကြသူတွေနဲ့ပ တ်သက်ပြီး ပြောပြ လာပါတယ်..။သူမကိုယ်တိုင်လည်း အလိမ်ခံရဖူးတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြန်လည်ပြောပြရင်း သူများ ချွေးနည်းစာ အလှူငွေတွေကို မတရားလိမ်စားနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လိပ်ပြာလုံစေဖို့ကို ထိထိမိမိလေး ပြောပြထားတာပါ..။
“အလှူငွေတွေမတရားလိမ်စားပြီး လိပ်ပြာလုံရဲ့လား တဆင့်ခံ လှူပေးတဲ့ သူတွေအရမ်းများလာပီး အလှူငွေတွေကို အမျိုးမျိုးလိမ်နေကြတာ ဘာလို့ပါလဲ?? ဒီငွေတွေကို ခုလိုလိမ်ပြီးသုံးနိုင်ကြသေးတာအံ့ဩမိပါတယ်… ကိုယ်လည်း အရင်က၂ခါလောက်ခံခဲ့ရဖူးတယ် ကိုယ့်ချွေးနဲစာလေ ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ ငိုတောင်ငိုခဲ့ဖူးတယ်..ပီးတော့ ကိုယ့်ဘက်ကခွင့် လွှတ်ပီးထားလိူက်ပါဆိုပီး နေခဲ့ပေမယ့် ကံကြမ္မာက မနေပါဘူး
ပြောချင်တာက ခုလိုလူတိုင်းခက်ခဲပြီး မသေရုံတမယ် အားတင်း ရုန်းကန်နေတဲ့ အချိန် မှာ ပိုလို့တောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး. ဘာသာတိုင်းက ခုလိုပဲသင်ပြ/ပြောပြထားပါတယ် လူတွေ ငိုယိုပြီးမှ ရတဲ့အပူစာကို စားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်ပြီးစားပါ မပြောလိုပါဘူး ဘုရားတရားဆိုတာ ဘန်းပြလုပ်ပီး လူချင်ခင်မှုကိုရနိုင်ပေမယ့် အတွင်းထဲက စိတ်နှလုံး ကို ဘုရားက သိမြင်ပါတယ် .. လိပ်ပြာ လုံကြပါစေ။
အလှူရှင်တွေအပေါ် ဒီထက်မက သာ၍တိုးပွါးသော အောင်မြင်မှုတွေ ရကြပါစေ လှူရင်းနဲ့တိုးပွါးသော ပစ္စည်းဥစ္စာဆထက်တပိုး ရှိပါစေ တဆင့်ခံ လှူပေးတဲ့ လူငယ် ပရဟိတ ကလေးတွေ Volunteers အပေါ် တောက်ပ တဲ့ အနာဂတ်တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်မယ့်လမ်းမှာ ဘုရားသခင်သာ၍ ကောင်းချီးပေးပါစေ..” ဆိုပြီး အိန်ဂျယ်လမုန်က ရေး သားပြောပြထားတာပါ..။
Photo – Angel Lamung’s Fb Acc
ပရိသတျကွီးရေ.. မျောလျဒယျသရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြော အိနျဂယျြလမုနျကတော့ အနုပညာ လောကမှာ ယောကျြားလေး ပရိသတျတှေ အပွငျ မိနျးကလေး ပရိသတျတှကေပါ ခဈြခငျအားပေးနကွေတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပါပဲ..။ အောငျမွငျတဲ့အနုပညာရှငျအဖွဈ ရပျတညျနတေဲ့သူမကတော့ လကျရှိအခွအေနတှေေ မှာလညျး သူမအနနေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှေ တတျနိုငျ သလောကျပွုလုပျကာ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ တဈသားတညျး ရပျတညျနတော တှရေ့ပါတယျ..။
ကိုယျတိုငျလမျးပျေါထှကျကာ လှုပျရှားမှုတှမှော အငျတိုကျ အားတိုကျပါဝငျနတေဲ့အပွငျ လှူဒါနျးမှုတှေ မှာလညျး လကျမနှေးဘဲ အလှူလေးတှေ ပွုလုပျနတေဲ့ အိနျဂယျြလမုနျ ကတော့ အလှူငှတှေကေို လိမျစားနကွေသူတှနေဲ့ပ တျသကျပွီး ပွောပွ လာပါတယျ..။သူမကိုယျတိုငျလညျး အလိမျခံရဖူးတဲ့ အကွောငျးလေးကို ပွနျလညျပွောပွရငျး သူမြား ခြှေးနညျးစာ အလှူငှတှေကေို မတရားလိမျစားနကွေတဲ့သူတှနေဲ့ပတျသကျပွီး လိပျပွာလုံစဖေို့ကို ထိထိမိမိလေး ပွောပွထားတာပါ..။
“အလှူငှတှေမေတရားလိမျစားပွီး လိပျပွာလုံရဲ့လား တဆငျ့ခံ လှူပေးတဲ့ သူတှအေရမျးမြားလာပီး အလှူငှတှေကေို အမြိုးမြိုးလိမျနကွေတာ ဘာလို့ပါလဲ?? ဒီငှတှေကေို ခုလိုလိမျပွီးသုံးနိုငျကွသေးတာအံ့ဩမိပါတယျ… ကိုယျလညျး အရငျက၂ခါလောကျခံခဲ့ရဖူးတယျ ကိုယျ့ခြှေးနဲစာလေ ဝမျးနညျးလှနျးလို့ ငိုတောငျငိုခဲ့ဖူးတယျ..ပီးတော့ ကိုယျ့ဘကျကခှငျ့ လှတျပီးထားလိူကျပါဆိုပီး နခေဲ့ပမေယျ့ ကံကွမ်မာက မနပေါဘူး
ပွောခငျြတာက ခုလိုလူတိုငျးခကျခဲပွီး မသရေုံတမယျ အားတငျး ရုနျးကနျနတေဲ့ အခြိနျ မှာ ပိုလို့တောငျ မလုပျသငျ့ပါဘူး. ဘာသာတိုငျးက ခုလိုပဲသငျပွ/ပွောပွထားပါတယျ လူတှေ ငိုယိုပွီးမှ ရတဲ့အပူစာကို စားနိုငျတယျဆိုရငျတော့ ဆကျပွီးစားပါ မပွောလိုပါဘူး ဘုရားတရားဆိုတာ ဘနျးပွလုပျပီး လူခငျြခငျမှုကိုရနိုငျပမေယျ့ အတှငျးထဲက စိတျနှလုံး ကို ဘုရားက သိမွငျပါတယျ .. လိပျပွာ လုံကွပါစေ။
အလှူရှငျတှအေပျေါ ဒီထကျမက သာ၍တိုးပှါးသော အောငျမွငျမှုတှေ ရကွပါစေ လှူရငျးနဲ့တိုးပှါးသော ပစ်စညျးဥစ်စာဆထကျတပိုး ရှိပါစေ တဆငျ့ခံ လှူပေးတဲ့ လူငယျ ပရဟိတ ကလေးတှေ Volunteers အပျေါ တောကျပ တဲ့ အနာဂတျတှနေဲ့ ရှဆေ့ကျမယျ့လမျးမှာ ဘုရားသခငျသာ၍ ကောငျးခြီးပေးပါစေ..” ဆိုပွီး အိနျဂယျြလမုနျက ရေး သားပွောပွထားတာပါ..။
ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အောန်ဆိုင်း
သူမရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေတွေကုန်ပြီး ဘဏ်တွေ ကလဲ ငွေထုတ်မရ တာကြောင့် သူမရဲ့စိန်နားပကပ်ရောင်းပြီးလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်…..